Chengetedzo, Kuvanzika uye Makuki | la-manette.com
Mhando dzeData dzakaunganidzwa
Muridzi haape runyoro rwemhando dzeData Yega yakaunganidzwa.
Ruzivo rwakazara pamhando yega yega yeData Yega yakaunganidzwa inopihwa muzvikamu zvakatsaurirwa kune iyi yekuvanzika mutemo kana mune chaiyo inotsanangura zvinyorwa zvakaburitswa data risati raunganidzwa.
Yega Yega data inogona kupihwa pachena neMushandisi, kana, mune yeKushandisa Data, inounganidzwa otomatiki kana uchishandisa ichi Chikumbiro.
Kunze kwekunge zvaratidzwa neimwe nzira, data rese rakakumbirwa neChikumbiro ichi rinosungirwa uye kusavapo kwavo kungaita kuti zvisaite kupa masevhisi nechikumbiro ichi. Muchiitiko icho Chikumbiro ichi chataura kuti imwe Dhata haisungirwe, Vashandisi vakasununguka kuti vasataure nayo pasina mhedzisiro pakuwanikwa kana kushanda kweSevhisi.
Vashandisi vasina chokwadi nezve inosungirwa Yemunhu Data vanokokwa kuti vabate Muridzi.
Chero kushandiswa kweMakuki - kana mamwe maturusi ekutevera - neichi Chikumbiro kana nevaridzi vechitatu-bato masevhisi anoshandiswa neChikumbiro ichi chinangwa chekupa Sevhisi yakakumbirwa neMushandisi, mukuwedzera kune zvimwe zvinangwa zvinotsanangurwa mugwaro rino uye muCookie. Policy, kana iripo.
Vashandisi vane mutoro kune chero Yemunhu Data yevatatu mapato akawanikwa, akaburitswa kana kutaurwa kuburikidza neChikumbiro ichi uye vanosimbisa kuti vanowana mvumo yemunhu wechitatu kupa iyo data kuMuridzi.
Nzira uye nzvimbo yekugadzirisa data
Iye Muridzi anotora matanho ekuchengetedza akakodzera kudzivirira kupinda kusingatenderwe, kuburitsa, kugadziridzwa kana kuparadzwa kweData.
Kugadziriswa kwedata kunoitwa uchishandisa makomputa kana IT zvishandiso, kutevedzera maitiro uye nzira dzesangano dzine hukama zvakanyanya nezvinangwa zvakaratidzwa. Pamusoro peMuridzi, iyo Dhata inogona kuwanikwa, mune dzimwe nguva, kune mamwe mapoka evanhu vari kutungamira kushanda kweChikumbiro ichi (kutonga, kutengesa, kushambadzira, dhipatimendi rezvemitemo, system manejimendi) kana kumapato ekunze (akadai sevatengesi. wechitatu-bato tekinoroji masevhisi, mameseji, vanopa vanopa, makambani eIT, masangano ekutaurirana) akasarudzwa, pazvinenge zvakakodzera, seMakontrakta neMuridzi. Rondedzero yakagadziridzwa yezvikamu izvi inogona kukumbirwa chero nguva kubva kuMuridzi.
Nheyo dzepamutemo dzekugadzirisa
Iye Muridzi anogona kugadzirisa Yega Dhata ine chekuita neVashandisi kana imwe yeanotevera mamiriro ichishanda:
Vashandisi vakapa mvumo yavo kune chimwe kana zvimwe chinangwa chaicho; Ongorora: Zvinoenderana nemimwe mitemo, Muridzi anogona kupihwa mvumo yekugadzira Yako Dhata kudzamara Mushandisi aramba ("kusarudza-kubuda"), pasina kuvimba nemvumo kana chimwe chezvigadziko zvinotevera nyaya dzemutemo. Nekudaro, mamiriro aya haashande kana kugadziriswa kwePersonal Data kuri pasi pemutemo weEuropean data kuchengetedza;
kupihwa kweData kwakakosha pakuitwa kwechibvumirano neMushandisi kana chero pre-kondirakiti chisungo chekupedzisira;
kugadzirisa kwakakosha kutevedzera chisungo chepamutemo icho Muridzi ari pasi pacho;
kugadziridzwa kwacho kwakabatana nebasa rinoitwa mukufarira veruzhinji kana mukushandiswa kwechiremera cheruzhinji chakapihwa Muridzi;
kugadzirisa kwacho kunodiwa nekuda kwezvinangwa zvepamutemo zvinotevedzwa neMuridzi kana nevechitatu bato.
Chero zvazvingaitika, Muridzi achafara kukubatsira kujekesa hwaro hwepamutemo hunoshanda pakugadziriswa, uye kunyanya kana kupihwa kwePersonal Data kuri pamutemo kana chibvumirano chinodiwa, kana chinodiwa kuti upinde muchibvumirano.
Iyo Dhata inogadziriswa kuhofisi yakanyoreswa yeMuridzi uye mune dzimwe nzvimbo dzese uko mapato ane chekuita nekugadziriswa aripo.
Zvichienderana nenzvimbo yeMushandisi, kuchinjisa data kunogona kuita kuti data rekupedzisira riendeswe kune imwe nyika isiri yake. Kuti uwane zvimwe nezve nzvimbo yekugadziriswa kweData rakatamiswa, Vashandisi vanogona kubvunza chikamu icho chine ruzivo pamusoro pekugadziriswa kweData Yega.
Vashandisi vanewo kodzero yekuziva hwaro hwepamutemo hwekuendeswa kwedata kune imwe nyika iri kunze kweEuropean Union kana kune chero sangano repasi rose rinotongwa neruzhinji mutemo wepasirese kana kugadzirwa nenyika mbiri kana dzinopfuura, seUnited Nations, pamwe nechengetedzo. matanho anotorwa neMuridzi kuchengetedza Data yavo.
Kana kuchinjisa kwakadaro kukaitika, Vashandisi vanogona kuziva zvakawanda nekubvunza zvikamu zvinoenderana zvegwaro iri kana kubvunza neMuridzi vachishandisa ruzivo rwakapihwa muchikamu chekuonana.
Personal Data inogadziriswa uye kuchengetwa kwenguva yakareba sezvaidiwa kune chinangwa chayakaunganidzirwa.
Personal Data inounganidzwa nekuda kwezvinangwa zvine chekuita nekuita kwechibvumirano pakati peMuridzi neMushandisi inofanirwa kuchengetwa kusvika chibvumirano chaitwa.
Yako Yega Dhata inounganidzwa nekuda kwezvinangwa zveMuridzi zviri pamutemo zvinofarirwa zvinofanirwa kuchengetwa kwenguva yakareba sezvinodiwa kuzadzisa izvo zvinangwa. Vashandisi vanogona kuwana ruzivo rwechokwadi maererano nezvido zviri pamutemo zvinotevedzwa neMuridzi muzvikamu zvinoenderana zvegwaro rino kana kubata Muridzi.
Iye Muridzi anogona kubvumidzwa kuchengetedza Yega Dhata kwenguva yakareba nguva imwe neimwe iyo Mushandisi akapa mvumo kune zvakadaro kugadzirisa, chero kubvumirwa kwakadaro kusingabviswe. Uye zvakare, Muridzi anogona kusungirwa kuchengetedza Yega Dhata kwenguva yakareba pese pazvinenge zvichidikanwa pakuita kwechisungo chepamutemo kana nekuraira kwechiremera.
Kana nguva yekuchengetedza yapera, Personal Data ichabviswa. Naizvozvo, kodzero yekuwana, kodzero yekudzima, kodzero yekugadzirisa uye kodzero yekutakura data haigone kushandiswa mushure mekupera kwenguva yekuchengetedza.
Vashandisi vanogona kushandisa dzimwe kodzero maererano neData yavo yakagadziriswa neMuridzi.
Kunyanya, Vashandisi vane kodzero yekuita zvinotevera:
Bvisa mvumo yavo chero nguva. Vashandisi vane kodzero yekubvisa mvumo yavo kana vakatopa mvumo yavo pakugadziriswa kweData ravo.
Rambai kugadzirisa kweData ravo. Vashandisi vane kodzero yekupokana nekugadziriswa kweData yavo kana kugadziridzwa kuchiitwa zviri pamutemo kunze kwemvumo. Tsanangudzo inowedzerwa muchikamu chakakodzera pazasi.
Svika yavo Data. Vashandisi vane kodzero yekuziva kana iyo Dhata iri kugadziriswa neMuridzi, kuwana ruzivo rwezvimwe zvinhu zvekugadzirisa uye kuwana kopi yeData iri kugadziriswa.
Tarisa uye uwane kugadziriswa. Vashandisi vane kodzero yekuona chokwadi cheData yavo uye kukumbira kuti ivandudzwe kana kugadziriswa.
Deredza kugadziriswa kweData yavo. Vashandisi vane kodzero, pasi pemamwe mamiriro, kudzikamisa kugadzirisa kweData yavo. Muchiitiko ichi, Muridzi achagadzirisa Data yavo chete kuti aichengete.
Ita kuti Yavo Yechemunhu Data ibviswe kana kudzimwa. Vashandisi vane kodzero, pasi pemamwe mamiriro, kuti vawane kudzimwa kweData ravo kubva kuMuridzi.
Dzora data ravo uye uvaendese kune imwe data controller. Vashandisi vane kodzero yekudzoreredza Dhata yavo mune yakarongeka, inowanzoshandiswa uye inoverengeka muchina fomati uye, kana zvichigoneka, kuendesa kune mumwe mutongi pasina chipingamupinyi chechero rudzi. Iyi gadziriro inoshanda, chero iyo Dhata ichigadziriswa neotomatiki nzira uye kuti kugadzirisa kunoenderana nemvumo yeMushandisi, pachibvumirano icho Mushandisi ari bato kana pane pre-kondirakiti zvisungo.
Isa chichemo. Vashandisi vane kodzero yekumhan'ara kune avo vane hunyanzvi hwekuchengetedza data.
Mashoko ane chekuita nekodzero yekuramba kugadziriswa
Kana Yechemunhu Dhata ichigadziriswa mukufarira veruzhinji, mukushandiswa kwechiremera chepamutemo chakapihwa Muridzi kana nekuda kwezvido zviri pamutemo zvinotevedzwa nevekupedzisira, Vashandisi vanogona kupokana nekugadziriswa uku nekupa chikonzero chine hukama. inofanira kupembedza kushora uku.
Vashandisi vanofanirwa zvakadaro kuziva kuti kana Yavo Yega Dhata yakagadziridzwa nechinangwa chekutengesa zvakananga, vanogona kupokana nekugadziriswa uku chero nguva pasina chikonzero. Kuti uone kana Muridzi ari kugadzirisa Yega Dhata nekuda kwezvinangwa zvekushambadzira zvakanangana, Vashandisi vanogona kutarisa kune zvikamu zvakakodzera zvegwaro iri.
Mashandisiro ekodzero idzi
Chero chikumbiro chekushandisa kodzero dzeMushandisi chinogona kutaurirwa kuMuridzi uchishandisa iyo yekutaurirana yakapihwa mugwaro iri. Izvi zvikumbiro zvinogona kushandiswa pasina muripo uye zvichadzidzwa naMuridzi nokukurumidza sezvinobvira uye nguva dzose mukati memwedzi mumwe.
Rumwe ruzivo rwekugadzirisa uye kuunganidzwa kweData
Iyo Yemushandisi Yechemunhu Data inogona kushandiswa zviri pamutemo neMuridzi mudare kana mumatanho anotungamira kune danho repamutemo rinobva mukushandiswa zvisina kunaka kweChikumbiro ichi kana Masevhisi ane hukama.
Mushandisi anoziva nezve chokwadi chekuti Muridzi anogona kudikanwa kuti aburitse Yega Dhata pakukumbira kwevakuru vehurumende.
Ruzivo rwekuwedzera maererano neMushandisi Yemunhu Data
Pamusoro peruzivo rwuri mugwaro rekuvanzika iri, Chikumbiro ichi chinogona kupa Mushandisi ruzivo rwekuwedzera uye rwemamiriro ezvinhu maererano nemamwe masevhisi kana kuunganidzwa nekugadziriswa kweData Yega.
System matanda uye kugadzirisa
Nechinangwa chekushanda nekugadzirisa, ichi Chikumbiro uye chero chechitatu-bato sevhisi inogona kuunganidza mafaera anorekodha kupindirana neichi Chishandiso (system matanda) kana kushandisa imwe Yemunhu Data (senge IP kero) nechinangwa ichi.
Ruzivo rwusina kuiswa mupolicy iyi
Rumwe ruzivo nezve kuunganidzwa kana kugadziridzwa kwePersonal Data inogona chero nguva kukumbirwa kubva kuMuridzi. Ndapota onai mazita ekutanga kwegwaro rino.
Mabatirwo Anoitwa Zvikumbiro
Ichi Chikumbiro hachitsigire "Usa Track" zvikumbiro.
Tarisa kune zvakavanzika marongero evechitatu-bato masevhisi kuti uone kana vachigamuchira kana kwete zvikumbiro zve "Usa Track".
Shanduko kumutemo wekuvanzika uyu
Iye Muridzi anochengetera kodzero yekuita shanduko kune iyi yekuvanzika mutemo, chero nguva, nekuzivisa Vashandisi vayo pane ino peji uye pamwe mune ino Chikumbiro kana - nepamusoro pehunyanzvi uye zviri pamutemo zvinogoneka - nekutumira chiziviso kune Vashandisi kuburikidza neruzivo rwekuonana rwuripo. kuMuridzi. Zvinokurudzirwa kubvunza peji ino kazhinji, zvichireva zuva rekupedzisira gadziriso inoratidzwa pazasi.
Kana shanduko dzichipesvedzera mabasa ekugadzirisa anoitwa pahwaro hwemvumo yeMushandisi, Muridzi anofanira kuwana mvumo nyowani kubva kuMushandisi kana zvichidikanwa.
Ukraine inoratidza kurwiswa kwewebhusaiti yaive 'chivharo chezvimwe zvinoparadza zviitiko' | Nhau dzesainzi uye dzehunyanzvi
Iyo 'The Walking Dead' mwaka wechigumi neimwe ichave riini paNetflix?
Adoption simulator makodhi kuti uwane rombo rakanaka, rudo uye mari (Ndira 2022)
'Mambokadzi Charlotte': Zvese zvatinoziva nezve Netflix's Bridgerton spin-off
Akashata Bhizinesi makodhi kuti uwane emahara mazango, matehwe uye CR (Ndira 2022)